BYD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု TYSiC – Pandaily
BYD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု TYSiC
Jun 16, 2022, 21:55ညနေ 2022/06/16 23:08:16 Pandaily
ဆီလီကွန် ကာ ဘို က် (SiC) epitaxial wafers များကို တီထွင် သူနှင့် ထုတ်လုပ်သူ TYSiC သည်မ ကြာ သေး မီက စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အတွက် တရုတ် အုပ်ချုပ်ရေး တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။BYD ကို အစု ရှယ်ယာရှင် အသစ် အဖြစ် ထည့် ပါကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး သည် ယွမ်သန်း ၁၀၀ အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂. ၅၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက Huawei နှင့်ဆက်နွယ် သည့် Shenzhen Hubble Technology Investment Partnership သည်လည်း ကုမ္ပဏီ တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
TYSiC ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Lee Xiguang ၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွင် ဆီလီကွန် ကာ ဘို က် epitaxial wafers ၊ semiconductor ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချ ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာ့ အဆင့် မီ SiC-CVD သုံး ခုနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာ များ ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ TYSIC သည် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ အင်စတီကျု နှင့်တရုတ် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီ တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆီလီကွန် ကာ ဘို က် အင်စတီကျု ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင် ခဲ့သည်ဟု TYSIC ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Zhihuiya ၏အဆိုအရ TYSIC ၏ မကြာသေးမီက အာရုံစိုက် မှုမှာ ဆီလီကွန် ကာ ဘို က် ၊ လင်း ကျောက် ပြွန် ၊ epitaxial wafers နှင့် semiconductors စသည့် နည်းပညာ နယ်ပယ်များတွင် ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ ၅၂ ခုကို ထုတ်ဝေ ခဲ့ပြီး ၅၁. ၉၂% သည် တီ ထွ င်မှု မူပိုင်ခွင့် များဖြစ်သည်။ စျေးကွက် တန်ဖိုး မြင့်မားသော အခြား မူပိုင်ခွင့် များတွင် “ SiC epitaxial wafers များအတွက် ဓာတု-စက်မှု သန့်ရှင်းရေး နည်းလမ်း” ပါဝင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD သည် Shaoxing ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ၏တိုးတက် မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့သည်
နှစ်ပေါင်းများစွာ BYD သည် စက်မှု ကွင်းဆက် ၏အထက် နှင့်အောက် ပိုင်းတွင် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Tianyan စစ်ဆေး မှုအရ BYD သည် & nbsp အပါအ ၀ င် ကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၆၀ ကျော် တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ BYD Automobile Co., Ltd., Shenzhen BYD Lithium Battery Co., Ltd., Fenmeng Industrial Co.
တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက် အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု များမှတဆင့် BYD သည် မော်တော်ကား များ၊ လီ သီ ယမ် လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ၊ ရထား လမ်း၊ ပြသ သည့် နည်းပညာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အိမ်ခြံမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု စသည့် ကုမ္ပဏီ ၉၀၀ နီးပါး ကိုထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ရှိသော စီမံကိန်း များသည် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ နှင့်စွမ်းအင် အသစ် များတွင် BYD ၏အဓိက အားသာချက်များကို အဓိကထားသည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အချို့သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တွင်ပိုမို ကြီးမားသော အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကိုသဘောပေါက် ခဲ့သည်။
မှတ်သား သင့် သည်မှာ BYD သည်၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှ semiconductors, lithium batteries, precision manufacturing နှင့်အခြား နယ်ပယ် များတွင်ပါ ၀ င်သည့် ကြံ့ ကုမ္ပဏီ များကိုလည်း ပေါက်ဖွား စေခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် BYD Semiconductor သည် IPO တစ်ခု ပြုလုပ် တော့ မည်ဖြစ်သည်။